वैकल्पिक सरकारका प्रस्ताव | eAdarsha.com
वैकल्पिक सरकार गठन गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारलाई विस्थापित गर्नुपर्दछ भनी लामो समयदेखि कराए तापनि त्यसबारे औपचारिक वार्ता भएको थिएन । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीका रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीसमेतको औपचारिक बैठक बोलाएर वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व लिन तयार भएको जनाएर त्यसको लागि सहयोग गर्न आग्रह ग¥यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्न तयार भएको उल्लेख गरेपछि स्थितिमा केही परिवर्तनको आभाष भएको छ । माओवादी केन्द्र त्यसबाट खुसी भएको छ भने कांग्रेसभित्रै देउवाको आलोचना गर्नेहरुले देउवा ठीक ठाउँमा आएको मूल्यांकन गरेका छन् ।
वैकल्पिक सरकारको लागि त्यसरी औपचारिक बैठक बस्नु निश्चय नै महत्वपूर्ण कुरा हो तर संसदको अंक गणितअनुसारै जनता समाजवादी पार्टीको सहयोग बिना वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्दैन । त्यो पार्टीले यही ओली सरकारबाट नै आफ्ना मागहरु पूरा गर्न लागि परेको छ र यो सरकारले नै माग पूरा गरे यसैलाई समर्थन गर्ने जनाएको छ । उनीहरुले आफ्नो मागलाई महत्वपूर्ण सम्झेका छन् । जनताका अर्काे नेताहरु डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले सरकारको विरोधमा जति सुकै चिच्याए तापनि उनीहरुले आफ्नै सहकर्मी नेताहरुलाई सम्झाउन सकेका रहेनछन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । त्यो पार्टीले वैकल्पिक सरकारको प्रस्तावबारे विचार गर्न केही समय मागेका छन् ।
उता ओली सरकार सकेसम्म जसपाका मागहरु पूरा गर्न प्रयास गरिरहेको छ । जसपाले बिहीबार आफ्ना नेता र कार्यकर्ताहरु २ सय ८ जनाको मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारलाई विवरण पठाइएको छ । उनीहरुले आफ्नो माग पूरा गराउने यो उपयुक्त बेला सम्झेका छन् । त्यसैमा लागिरहेका छन् । उनीहरुले यसअघिका सरकारलाई आफ्नो माग राखेका थिए । उनीहरुले वैकल्पिक सरकारले माग पूरा गर्ला कि नगर्ला भनेर पनि सोच्दै छन् । उनीहरुले प्रष्ट जवाफ नदिएसम्म वैकल्पिक सरकारको कुरा अघि बढ्ने अवस्था छैन । आमागी केही दिन सबै नेताहरु पर्ख र हेरको स्थितिमा रहनेछन् ।
खबरकर्म र कोरोनाको जोखिम
सम्पादक वैशाख ३१, २०७८
हिजोआज सामाजिक सञ्जाल खोल्नेबित्तिकै त्रासलाग्दा खबर देखिन्छन् । पहिला पहिला यति संक्रमित भए भन्ने खबरका लिंक आउँथे । ए उसलाई…
नयाँ सरकारका चुनौती
सम्पादक वैशाख ३०, २०७८
विभिन्न शंका उपशंका र आकलनबीच गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पुन नियुक्त भएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरुको दाबी रहँदा रहँदै…
प्राणवायुको जोहो गर
सम्पादक वैशाख २८, २०७८
दोस्रो लहरको कोरोनाले मुलुकलाई आक्रान्त पारिसकेको छ । दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो छ । पछिल्लो २४ घन्टाको मात्र आँकडा…
सम्पादक वैशाख २७, २०७८
गण्डकीको राजनीतिक घटनाक्रमले एकाएक नयाँ मोड लिएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि अनेकखाले अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ ।…
आफ्नो डाक्टर आफै
सम्पादक वैशाख २४, २०७८
लाग्थ्यो रेडियो, टिभीमा बारम्बार बजिरहने सूचनाको औचित्य के होला ? सुनेपछि मनमनै भनिन्थ्यो जाबो हात धुन पनि यसले भन्नुपर्ने मेरो…
सम्पादक जेठ १, २०७८
Oxygen cylinders provided to ward-level isolation facility
Isolation centre in Annapurna